म उच्च पीआर जीओवी ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्छु?
उच्च Pagerank प्राप्त गर्नुहोला GOV ब्याकलिङ्कहरूले तपाईंको वेबसाइटको रैंकिंगलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्छ. तथापि, उनीहरूलाई निश्चित रूपमा चुनौतीपूर्ण र समय-उपभोग गर्ने कार्य हो. र, निस्सन्देह, केहि मान्छे अझै पनि तर्क गर्छ कि Google ले वास्तव मा उन डट EDU को व्यवहार गर्दैन या डट GOV बैकलिंक को कुनै पनि भिन्नता देखि नहीं. यद्यपि, एसईओ मा शेर को साझा वा वास्तविक संभावना अन्यथा सोच्न. किन? ठीक छ, हामी कल्पना गर्छौं कि Google ले उनीहरूको अन्य ज्ञात डोमेनहरू भन्दा राम्रो पहिचान गर्दैन (ई. g. , डट कम, डट नेट, वा डट ORG). वैसे पनि, GOV ब्याकलिङ्कहरूको उच्च प्राविधिक कारकले तिनीहरूलाई थप वजन र शक्ति प्रदान गर्दछ, मुख्यतः खोजी इन्जिन अनुकूलनको दृश्य.
त्यसैले, Google लाई अझै दिएको कुनै आधिकारिक परिभाषा छैन भनेर उपेक्षा गर्नुहोस्, डट GOV ब्याकलिङ्कहरूको मुख्य महत्व कहिल्यै बेवास्ता गरिनै पर्छ।. वास्तव मा, उनि एसईओ को अधिकतर ज्यादातर शक्तिशाली लिंक इमारत को एक पवित्र क्रेन को रूप मा मान्यता प्राप्त छ, किनकी उनि सामान्यतया सबै विश्वसनीय र केवल राम्रो तरिकाले स्थापित वेबसाइटहरु बाट आ रहे हो.
वास्तविक एसईओ वैल्यू
त्यसो भए, डट GOV ब्याकलिङ्कहरूको वास्तविक एसईओ मान के हो? खैर, तिनीहरूसँग कुनै सुपरफायर छैन. तर यो शायद अजीब सुझाव अझै एक निश्चित हदसम्म सत्य छ. र निस्सन्देह, कुनै पनि वेबसाइट वा ब्लग बिना उनीहरूलाई प्रोफाइलमा ती ब्याकलिङ्कहरू समेत पाउन सकिन्छ, र अझै Google मा राम्रो तरिकाले रेट गर्छ. मेरा मतलब यो हो कि यदि तपाईं केहि अतिरिक्त डट जीओवी ब्याकलिङ्कहरू कमाउनका लागि भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने, तपाईको वेबसाइट वा ब्लग प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहन निश्चित रूपले योग्य लाभ पाउनेछ, तपाईंको बलियो अधिकारको लागि धन्यवाद. त्यसोभए, एसईओ को लागि आफ्नो मूल्य को विचार यहाँ एक दुविधा आउँछ - यो डोमेन स्वयंसेन्टी वा कुनै सम्बन्धित अधिकारी आधारभूत संस्थाहरु द्वारा स्वामित्व मा डोमेन एक्सटेन्सन र अनलाइन स्रोत संग लिंक गर्न गाह्रो छ. कुरा यो छ कि तिनीहरूले कुनै पनि कारण वा कुनै उचित कारण बिना कुनै पनि लिङ्कलाई कहिल्यै लिंक गर्दैनन्.
मैले पहिले नै भनें, सरकारी ब्याकलिंक कमाई श्रम-गहन र समय-समय लाग्ने कार्य हो।. तर यो अझै पनि एक योग्य चीज हो, किनकि यो सधै सुन्दर राम्रो तरिकाले भुक्तानी गर्दछ - निश्चित रूपमा कुनै अन्य ब्याकलिङ्क भन्दा राम्रो छ, यहाँ सम्म कि सर्वश्रेष्ठ Pagerank वेबसाइटहरू वा शीर्ष प्राधिकरण डोमेनहरू. त्यसोभए, सुरू गर्नु अघि, तपाईले सबै ठाँउमा राख्नुभयो. मेरा मतलब तपाईको अवस्थित वेबसाइट वा ब्लग पृष्ठ सामग्री विशुद्ध जानकारीपूर्ण हुनुपर्छ, मुख्य विषयको लागि प्रासंगिक हुनुपर्छ र वास्तविक व्यक्तिको लागि उत्कृष्ट मूल्य प्रदान गरिनु पर्दछ।. यसबाहेक, तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा साइट एसईओ को बारे मा राम्रो तरिकाले गर्नु पर्छ उन राजनीतिक नींवहरु र उनको आधिकारिक साइटहरु को लागि पूरी तरिकाले अपील गर्न को लागी.
पहिलो र प्रमुख, सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको वेबसाइट को वर्तमान बैकलिंक प्रोफाइल पहिले देखि नै केहि उच्च पीआर, पीए, र डीए लिंक्स असर. त्यस तरिका, तपाईं ती धेरै बहुमूल्य व्यक्तिहरू प्राप्त गर्न अधिक अनुकूल हुन सक्नुहुनेछ. त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी छिन्। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईदिनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ।.
सही साइटहरु को लागि खोज रहे हो
एक पल्ट जब तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइट या ब्लग संग केहि ठाँउ हो, यो लिंक को लागि सही सरकारी वेबसाइटहरु को खोज को समय संग. कुरा यो छ कि त्यहाँ धेरै डोमेन एक्सटेन्सनहरू, सापेक्ष आधार र आधिकारिक संस्थाहरूको वास्तविक गणना भन्दा धेरै छन्. यसको मतलब यो नभएसम्म सबै अनलाइन स्रोतहरू डट GOV डोमेनहरूमा वास्तविक सरकारहरूसँग केहि गर्न सकेनन्. त्यसोभए, सही साइटहरू खोज्दै, तपाइँले उनीहरूको वैधतामा डबल-जाँच गर्न आवश्यक पर्दछ. हामी वास्तविक एजेन्सी र बाहिरी सान्दर्भिक स्रोतहरू कसरी पाउन सक्छौं? म "साइट" संग खोज सिफारिस गर्दछु. gov "उन्नत परिमार्जनहरू ताकि तपाईं एक थप सटीक फोकस सेट गर्न सक्नुहुनेछ.
शीर्ष सम्बन्धित ब्लगहरू / वेबसाइटहरू
मा टिप्पणी गर्दै हाँ, सरकारी ब्लगहरूमा टिप्पणी छोडेर वेबसाइटहरू उनीहरूको बहुमूल्य डट GOV ब्याकलिङ्कहरू कमाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।. निस्सन्देह, अन्यथा टिप्पणीको सन्दर्भमा ब्याकलिंकहरू फर्किनाले, अझ धेरै चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ. तर कार्य पूर्ण गर्नको लागि यो अझै पनि प्रयोगयोग्य तरिका हो, त्यसैले म केहि अरू भन्दा पहिले यो प्रयास गर्न सिफारिस गर्दछु.
त्यसैले, यो चीज हो कि सरकारी वेबसाइटहरु वा ब्लगहरु को शेर को साझा सीधा टिप्पणी को लागि कुनै ठाँउ छैन. उनीसँग यो विकल्प भए तापनि तिनीहरूका टिप्पणी विकल्पहरू NoFollow सँग सम्भव छन्. यसको मतलब तपाईंले सही साइट वा ब्लग पृष्ठहरू प्राप्त गर्नका लागि केहि समय र प्रयास तिर्न पर्नेछ जुन NoFollow होइन. यसको बावजूद एक उच्च पीआर डट जीओवी ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नका लागि तपाईका वास्तविक संभावनाहरु निकै स्लिम हुन सक्दछन्, एक टिप्पणी छोडेर एक शॉटको लायक हुन सक्छ।. बस सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको टिप्पणी प्रासंगिक र मूल्यवान पर्याप्त छ र स्पैमिंग को बिना आउछ.
राम्रो संभावनाहरु को लागी टिप्पणिहरु लाई दोहोरो टिप्पणिहरु को खोज गर्न को लागि, म "साइट को उपयोग गर्न को सिफारिश को:. gov inurl: blog. "यसको अलावा, टिप्पणीहरू बाट डट GOV ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै बाहेक, तपाईं केहि अन्य सुविधाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. हुनत, तथापि, तपाईंलाई एकदम राम्रो र सम्मोहक सामग्री चाहिन्छ. त्यसोभए, तलको संक्षिप्त अवलोकन गर्नु पर्छ.
निम्न मध्ये एक बारेमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्:
सरकारी एजेन्सी - गुणस्तर लेख लेख्नुहोस्, यो बजार राम्रो हुन्छ र केवल त्यसपछि एजेन्सीलाई सूचित गर्नुहोस्. यो दृष्टान्तको लागि, चलो कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई एक कम्पनी चलिरहेको छ जुन अक्षय ऊर्जा संग सम्झौता गर्दछ, वा उदाहरणको लागी, तपाईं एक ऊर्जा कुशल घर ठेकेदार हुनुहुन्छ. त्यसो त, तपाईलाई यहाँ सबैको आवश्यकता छ एक सम्बन्धित ब्लग पोष्ट छलफल वा एक नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यालय को लागि समर्पित लेख. प्रो टिप: ग्लोबल दर्शकहरूलाई लक्षित गर्दै विदेशी सरकारी एजेन्सीहरूसँग सम्पर्कमा ल्याउने एउटा राम्रो तरिका हो.
राजनीतिज्ञ - सरकारी एजेन्सीको बारेमा एक लेख लेख्ने अघिल्लो तरिका जस्तै, तपाईं एक अवलोकन गर्न वा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वा व्यक्तिलाई सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बारेमा निशुल्क निःशुल्क हुनुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसायमा प्रभाव पार्छ।. केहि भर्खरका सुझाव गरिएका कानुनहरूको सम्भावनाको बारेमा लेख्दा तपाईंको समय र प्रयत्न नबिर्सनुहोस्, उदाहरणको लागि, जुन तपाईको मुख्य व्यवसाय विषयसँग सम्बन्धित वा व्यावसायिक अपरेसनको शीर्ष सम्बन्धित क्षेत्रहरू हो।. केवल ठूलो सम्मोहक लेख सिर्जना गर्नुहोस् र त्यो प्रस्तावित राजनीतिज्ञ वा व्यक्तिको लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई लिङ्क गर्नुहोस्. त्यसपछि, तपाईंको नयाँ प्रकाशनको बारेमा रुचि अधिकारीहरूलाई सूचित गर्नुहोस्. (3 9)
एजेन्सी साक्षात्कार - एक प्रासंगिक विषय छनौट गर्नुहोस् र स्थानीय एजेन्सीको एक स्थापित सदस्य साक्षात्कार गर्नुहोस्. प्राय: सामान्यतया, तपाईं साक्षात्कार गर्न सहमत भएको छ, बेशक तपाईले सही विषय छलफल पाएको बताए. त्यस तरिका, तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा ब्लगमा लिङ्कको साथ प्रकाशन गर्न सक्षम हुनेछ, जुन सरकारी एजेन्सीलाई बुझाउँछ. ध्यान दिनुहोस्, कि केही अवस्थाहरूमा वा साक्षात्कार गरिएको व्यक्ति आफै वा सरकारी एजेन्सीहरू पनि उनीहरूको अन्तरवार्तामा साक्षात्कार पनि हुन सक्छन्. यो हो भने, तपाईं आफ्नो प्रारम्भिक एक अतिरिक्त थप अतिरिक्त डट GOV ब्याकलिङ्कको मजा लिन अधिक सम्भव हुनेछ. (3 9)
नयाँ सम्पर्क फारम बनाउनुहोस् - थप सम्पर्क उडान गर्न वा नयाँ सरकारी साझेदारीको स्थापना गर्न को लागी अधिक डट GOV ब्याकलिङ्कहरू उच्चतम Pagerank सम्भव साथ प्राप्त गर्न एकदम राम्रो तरीका हुन सक्छ।. निस्सन्देह, यो सँधै व्यवस्थित छैन - किनकि यहाँ सब केहि दृढतापूर्वक तपाईंको मुख्य वेबसाइटको वा ब्लग को आलामा निर्भर हुनेछ. यद्यपि, कहिलेकाहिँ यो अतिरिक्त सरकारी सम्पर्क ल्यान्ड गर्नको लागि एकदम राम्रा उचित अवसर हुनेछ. कुनै पनि परिस्थितिमा, एजेन्सीमा ब्याकलिंकको साथ प्रेस विज्ञप्तिको विकास अझै पनि एक शटको लायक छ. त्यस तरिका, ध्यान राख्नुहोस् कि सरकारी एजेन्सीको साथ साझेदारी साझेदारी पनि धेरै लाभकारी कुरा हो. आदर्श रूपले, यसले उनीहरूको आधिकारिक पृष्ठहरूलाई अक्सर तपाईंको मुख्य व्यवसाय वेबसाइट वा सहायक ब्लगमा लिंक गर्न सकिन्छ. (3 9)
आउट्रेचमा भाग लिनुहोस् - तपाईले अधिक अवसरहरूको साथ संसाधन पृष्ठ सिर्जना गर्न पनि सक्नुहुनेछ, वा स्थानीय व्यवसायको लागि केहि संसाधन पृष्ठहरूमा सूचीबद्ध गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।. तपाईं आफैलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि दान दानहरू एक समर्पित स्रोतमा सूचीबद्ध एक बहुमूल्य लिङ्कको साथ आफ्नो आफ्नै वेबसाइट वा ब्लगमा सूचीबद्ध गर्न बनाउनुहोस्।. (3 9)
प्रवाह - चापलूसी एक सरकारी वेबसाइट लगभग सधैँ ती बहुमूल्य ब्याकलिङ्कहरू कमाईरहेको छ. केवल एक सरकारी एजेन्सीको सबभन्दा कडा दुखाइ बिन्दुहरूको बारे थप जान्नुहोस् र सँधै सुन्न चाहने कुरा बताउन एक पोस्ट बनाउनुहोस्. बेशक, यो केहि अतिरिक्त डट GOV ब्याकलिङ्कहरू कमाउन ग्यारेन्टी तरीका हुन सक्दैन, तर यदि तपाईले सही तरिकालाई पक्का गर्नुहुन्छ - यो योजनाले राम्रो तरिकाले काम गर्दछ।.
सबै पछि, तपाईंलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको नयाँ डट GOV ब्याकलिङ्क हानिकारक छैनन्. मेरा मतलब छ कि यो गुगलको लागि संदिग्ध हुनेछ जब तपाईंको वेबसाइटको वा ब्लगको प्रोफाइल प्रोफाइल अचानक धेरै सरकारी लिङ्कहरूसँग सुधारिएको हुन्छ. त्यसैले, मैले लिङ्क इमारत र अनुसन्धानको लागि कुनैपनि निःशुल्क अनलाइन उपकरण प्रयोग गरी प्रत्येक नयाँ प्राप्त ब्याकलिंकमा डबल-चेक गर्न सिफारिस गर्दछु. अरूको बीचमा, मैले खुल्ला साइट एक्सप्लोरर, सेल्टल्ट विश्लेषक, र चिन्ता माढक फेला पारेको मेरो ब्लगको ब्याकलिङ्क प्रोफाइलको पूर्ण विश्लेषण चलिरहेको छ। Source . लगातार काम गरिरहनुहोस्, र शुभकामना!